Wai Yan Lin » others
My Web Hosting: The Last Day
My hosting will expire today. My site will down from tomorrow until someone buy me hosting.
continue reading 1.04.2008 |0Comment
ငယ်ရွယ၊် လွတ်လပ်အကန့်သတ်မဲ့စိတ်ကူးနဲ့ငါ့ရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းပစ်မယ်။ အသက်လေးရလာပညာဆိုတာနည်းနည်းသိပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှကမ္ဘာကြီးဟာ ကမ္ဘာကြီးပါပဲ။ အိပ်မက်ကိုဈေးဆစ်ငါချစ်တဲ့ငါ့တိုင်းပြည်တစ်ခုခုဖြစ်ရမည်ပေါ့သည်တစ်ခါလည်းတိုင်းပြည်ဟာ တိုင်းပြည်ပါပဲ။ ဘ၀ရဲ့ဆည်းဆာချိန်အိပ်မက်တွေ အရှိန်ကုန်စဇနီးမယားသမီးသားအတွက်ပေးဆပ်ဖို့ကြိုစားဆဲသူတို့လည်းသူတို့ဘာသာမိသားစုဟာ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သေရာညောင်စောင်းလဲလျောင်းချိန်ရောက်တော့မှငါသိရပြီ (ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ)ငါဟာငါပဲ၊ ဘာမှမပြောင်းလဲ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဘာသာပြန်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ရေးသူနာမည်အတိအကျမပါပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရေးခဲ့တယ်လို့ပဲ ပါပါတယ်။ လူတစ်ယောက် နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ကို ရေးထားတာလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်တုန်းက အိပ်မက်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေအများကြီးရှိခဲ့ကြမှာပါ။ အဲဒီအထဲက ဒီအချိန်မှာ ဘယ်နှစ်ခုများ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတာတော့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဖြစ်လာတာရှိသလို မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်မက်တွေဟာ သိပ်ကြီးကျယ်ခဲ့ကြမှာပါ။ ကြီးလာလေ အိပ်မက်တွေဟာ သေးသွားလေပါပဲ။ လူတွေအများစုဟာ အိပ်မက်တွေကို ပြောင်းပြန်မက်နေကြပါတယ်။ ငယ်ရာကကြီးသွားရမယ့်အစား ကြီးရာကငယ်လာကြတာများပါတယ်။ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေခံကစမှ အောင်မြင်မှာပါ။ ရည်မှန်းချက်အကြီးကြီးတွေရှိရင်…
continue reading 27.02.2007 |2Comments
others, poem, thoughts
အသက်၂၁နှစ် – စီးပွားရေးလုပ် – ရှုံး။အသက်၂၃နှစ် – ဥပဒေပြုကောင်စီမှာဝင်ပြိုင် – အရွေးမခံရ။အသက်၂၅နှစ် – စီးပွားရေးထပ်လုပ် – ထပ်ရှုံး။အသက်၂၆နှစ် – ရည်းစားသေ။အသက်၂၇နှစ် – သွက်ချာပါဒဖြစ်။အသက်၂၉နှစ် – ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနေရာဝင်ပြိုင် – အရွေးမခံရ။အသက်၃၄နှစ် – အောက်လွှတ်တော်မှာဝင်ပြိုင် – အရွေးမခံရ။အသက်၃၇နှစ် – အောက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာ။အသက်၃၉နှစ် – အောက်လွှတ်တော်မှာထပ်အရွေးခံရဖို့ဝင်ပြိုင် – ရှုံး။အသက်၄၆နှစ် – အထက်လွှတ်တော်မှာဝင်ပြိုင် – အရွေးမခံရ။အသက်၄၇နှစ် – ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ဝင်ပြိုင် – အရွေးမခံရ။အဲဒီကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုကြည့်ပြီး ဘယ်သူလဲဆိုတာသချင်မှာပဲ။ သူကတော့ အသက် ၅၁ နှစ်မှာ အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ အီဗရာဟင်လင်ကွန်း ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အားကျစရာပဲ။ ဒီလောက်ခဏခဏဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကျော်ဖြတ်လာနိုင်တာ။…
continue reading 23.02.2007 |2Comments